RASPBERRY "TOURMALINE": SHARAXAADDA KALA DUWAN, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Raspberry "Tourmaline": dabeecadaha, kacaawinta iyo xayawaanka
"Tourmaline" waa noocyo kala duwan oo raso ah oo rasaas ah, taas oo lagu kala gooyey ballaaran, mid la mid ah, iyo dhalid khusaysa. Tixgeli sharaxaadda noocyada kala duwan, sifooyinka ugu muhiimsan iyo shuruudaha aasaasiga ah ee beerahooda.
Kala duwanaanshaha "Tourmalin" waxaa abuuray L. I. Chistyakova iyo I I. Bogdanova oo ku yaal Saldhig Weyn ee Sverdlovsk. Waxaa la helay by xulashada laga bilaabo abuur ah helay helay natiijada ah pollination free of geedo of noocyo raspberry Scottish.
Fiiri liiska noocyada raspberry ee beeralayda ku talin kara: Maroseika, Vera, Bryansk Miracle, Monomakh's Hat, Giant ee Moscow, Patricia, Krepysh, Fairy Tale, Orange Miracle, "Himbo Top", "Brilliant", "Brusviana", "Lyachka", "Zyugan".
Nooc khudradda "Turmalin" waxay ku koraan qaabka duurka dhexdhexaad ah. Waxay gaadhaan dherer ahaan 1.4-2.2 mitir. Waxay leeyihiin dherer dhexdhexaad ah, caleemaha qumman, aad u xoog badan. Ma jiraan wax isdabajoog ah caleemaha.
Berry waa weyn - miisaanka 3.5-5.5 g, dhanaan-macaan ee dhadhanka, casaan cas oo casaan. Waxay leeyihiin qaab shaashad ah. Miro yar oo gaadhay qaangaadhka, si fiican ayaa loo saaraa lugta, waxay ku xiran kartaa waqti dheer duurka oo aan dib udhicin.
Ma taqaanaa? Waxaa jira raspberry guduud ah - natiijada ka soo gudbidda raspberries madow iyo cas. Noocyo aan caadi aheyn ayaa 1893-kii ku dhacay Geneva.
Xulashada goobta raspberries waa marxalad muhiim ah ee sii kordhaya. "Tourmaline" wuxuu jecel yahay iftiinka iyo meelo yaryar leeyihiin hooska.
Raspberry waa mid aad u dalbanaya ciidda taas oo ay koraan. Sababtoo ah waxaa ugu wanaagsan ee ku habboon dhulka dhulka daadsan, oo ay ku jirto qiyaasta ku filan ee Bacriminta organic iyo macdanta. Cadaadiska sunta sidoo kale waa muhiim - waa inay ahaataa inta u dhaxaysa 5.7-6.6 pH. U diyaari qorshe lagu beerayo raspberries horay iyo burburin dhammaan haramaha.
Ka hor inta beerto miraha waxay u baahan yihiin bacrimiya ciidda. Waxaad isticmaali kartaa digada, compost, ash, superphosphate, sulfate potassium.
Tilmaamaha ayaa ah in ubaxa buuggani aanu isla markiiba ku dhicin dhammaan dhererka. Marka hore, qaybta sare ee blooms. Ka dib markii taas, dhexe ayaa bilaabmaa inuu Bloom, oo kaliya ka dibna ubaxa u muuqdaan heerka hoose. Berry waxaa loo qoynayaa manjooyin by pollen u gaar ah, sida ubaxyadan dhirta this yihiin is-bacrin ah.
Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee saameeya dhalidda waa sida ugu adkee duurka ayaa la beeray. Inta u dhaxaysa saf ah waa in ay ahaataa masaafada 2-2.5 m, iyo inta u dhaxaysa dhirta naftooda - 0.4-0.6 m. laga bilaabo 2 ilaa 3 kg oo ka mid ah baadiyaha.
Ma taqaanaa? Waxaad samayn kartaa shaaha laga bilaabo caleemaha raspberry. Si arrintan loo sameeyo, waa in la dhajiyaa ka hor inta aan la dooran juice iyo madow, ka dibna la qalajiyey foornada.
Kala duwanaantan ayaa leh gaadiid fiican - inta lagu jiro kaydinta, berry ma noqon mid madow oo ha iskaga tagin.
Muddo markii ay aad u kulushahay banaanka, baadiyaha waxay u baahan tahay waraabin badan. Kala duwan ayaa si fiican loogu habeeyey in lagu noolaado deegaannada magaalooyinka (sida caadiga ah waxay qaadaan qiiqa iyo hawada hawada).
Tourmaline waxay leedahay iska caabin fiican ee kalluunka cagaaran iyo duqadda raspberry, laakiin mararka qaarkood waxaa wax yar laga yaabaa inay qaadaan cudur fungal ah oo la yiraahdo lafdhabarta, taas oo sababa muuqaalka dhoobo-casaan dheer oo caleemo ah. Waqti ka dib, dhibcoodku waxay noqdaan kuwo madow. Waxay muuqataa bisha Agoosto iyo Sebtembar.
Si looga hortago cudurkan, siiyaan daryeelka wanaagsan ee raspberries - qabta manjooyin waqtigooda iyo bacarimiso, ka saar caleemo jir ah oo la waxyeeleeyay, si joogto ah u ururiyaan caleemo dhacday. Doorka muhiimka ah ayaa la ciyaaraa meelaynta raspberries sidoo kale - meel qoyan, meelo u eg oo u muuqda in fangaska uu aad u sarreeyo. Xaaladaha daran, fungicides, sida dareeraha Bordeaux, "Fundazol", "Hom" iyo kuwa kale, ayaa caawin doona.
Waa muhiim! Haddii uu cudurku ku dhaco in ka badan kala badh baadiyaha, lama kaydin karo. Kuurkan waa in la rujiyaa oo la gubaa, oo ciidda ka hooseysa waa in lagu daaweeyaa fungicide. Laguma talinayo in la beero raspberries meeshan shanta sano ee soo socota.
"Tourmaline" waxay leedahay celcelis iska caabin ah dhaxan iyo mararka qaarkood jajabaan. Si kastaba ha ahaatee, kala duwan ayaa leh mid ka mid ah muuqaal wanaagsan - laga soo bilaabo dhammaadka hoose ee jiritaanka ee ka badbaaday jiilaalka, waxay soo saartaa laamo miro leh oo xoog badan, sidaas darteed magdhow ee luminta qaybta sare ee asliga ah.
Baro sida si habboon loo diyaariyo raspberries xilliga jiilaalka.
Noocyada nooca berry ah "Tourmaline" oo ku habboon isticmaalka guud. Inta badan, miraha waxaa la cunaa cusub. Waxay ka dhigaan casiir, wax lagu kariyo, shaah ama jajab. Sidoo kale "Tourmaline" ayaa ku haboon in lagu keydiyo.
Waa muhiim! Inkastoo xaqiiqda ah raspberry uu yahay badeeco yar-yar oo calorie ah, waxay ka kooban tahay qiyaastii 12% sonkorta, aalkolada, asidiinta iyo fitamiinada sida A, B iyo C.
Marka la barbardhigo noocyo kale, "Tourmaline" waxay leedahay tiro badan oo ah qaabab wanaagsan.
Gogol aan caleenta ku jirin caleemaha.
Miraha waxay leeyihiin dhadhan weyn.
Kordhinta cudurada sii kordhaya.
Geedo qasab ah xilliga dayrta.
Raspberry "Tourmaline" waa doorasho wanaagsan oo lagu beerayo labadaba guriga iyo beeraha. Miro weyn, midhaha dhadhanka ah ma ka tagi doono carruurta aan qaan-gaarin iyo dadka waaweyn, iyo sidoo kale waa mid caalami ah oo la isticmaalo oo si sahlan loo isugu darsado.